Kulirka - luhlobo luni lwendwangu, ukubunjwa kwalo, izithombe zezingubo ezigqoke ngezingubo ze-lycra, izinto ezivela ngaphakathi; okuyinto yalezizinto zokwakha kungcono ukukhetha
I-Kulirka - iyini le ndwangu nokuthi yini ekuthungeni kwayo (ukwakheka, ubungani, ukubuyekezwa)
Abathengi abaningi abanalo ulwazi mayelana nendwangu yokuvala futhi ngeke baphendule umbuzo: "Yiluphi uhlobo lwendwangu?" Sinqume ukutshela nokuchaza izindawo zalezizinto, sikhulume ngokubunjwa kwawo, ubukhulu kanye nokuhlanganiswa ne-lycra. Ukubukwa kwesithombe se-seamstress nesithombe semikhiqizo eqedile kuzokusiza ukuthi uqonde ukuthi yini ukuthungula kusuka ku-wad, nokuthi ihluke kanjani kokungena.
I-knitwear ibopha - yimuphi uhlobo lwezindwangu, isakhiwo sayo nesithombe
Ukugqokwa kwendwangu noma ubushelelezi bekhilimu yindwangu eboshwe, ehlanganisa ukotini (ngezinye izikhathi 100%). Futhi, ukuze uthole amandla e-fibre fibre ekugqoka, engeza i-polyester noma i-polyester. Uma ubheka umkhiqizo kusuka ebuhleni obuncithakalo, uzobona ukuthi kukhona ubuso (okwenziwe nge-"facial" loops) kanye ne-purl (ehlanganisa "izihluthulelo" ze-loops ngenkathi kuhlangene). Ngezinye izikhathi intambo ehlanganisiwe - i-elastane yengezwe ekubunjweni. Lokhu kubangela i-web, evulekile, engenalutho engaphelelwa yisikhathi lapho igugile, cishe ingenzi-creasing futhi ibe nesilinganiso esiphakeme kakhulu sokugqoka. I-"stretch" yekhwalithi yenziwe uhlobo loboya obubizwa ngokuthi ukucula. Lona ngendwangu yokudlela ebiza kakhulu kunazo zonke, okuvela kuzo lapho bethola izembatho zezemidlalo kanye nama-brand t-shirts. Qonda ukuthi yiluphi uhlobo lwendwangu yesikhumba, isithombe sezembatho ezenziwe ngomumo sizosiza.
Ubuso kanye nangaphansi kombhede wokubheja
Ukuhlunga ngombala wokuphrinta
Izakhiwo zobushelelezi be-culinary
ithatha umswakama kahle (ngaphandle: uma i-lycra ingena ekubunjweni)
Kuyini ukuthunga kusuka ekujuleni, izithombe namavidiyo
Abavakashi ezitolo zokugqoka abanesithakazelo kulokho abakubhalela khona ku-mop bangase bamangale lapho bezwa ukuthi ama-50% kuya ku-70% we-knitwear yanamuhla ayenziwa kulolu thambo. Ukufunda izinto ezinjalo zilula: ohlangothini lwazo olubonakalayo lubonakala "ama-pigtails" amancanyana, amancane, ngaphakathi ngaphakathi - amancane "amabhande", okubangelwa umshini wokubopha. Izingubo zezingane, amantombazane nabesifazane, izingubo eziseminyakeni eyishumi nambili, ezigqoke izintambo zokukhanya zikotini, ngisho nemibhobho yokulala kanye namathoyizi - ukwenza konke lokhu, abakhiqizi bathatha indwangu yesikhumba! Ngokuvamile izikhiya zenziwa uma zibopha ingubo yokugcoba, ikakhulukazi indwangu "iphefumula". Ubuningi bezinto ezinjalo buphakathi kokungu-135 kuya kwangu-190 g ngemitha yendawo ngayinye. Hamba kuzo hhayi kuphela izingubo zezingane nezentsha kuphela, kodwa futhi namathoyizi athambile, ama-pajamas, afaka izihlalo kanye nezihlalo, amashidi, ama-pillowcases. Ngokuvamile indwangu yemibala noma ikhona iphethini eliphrintiwe ..
Isithombe nevidiyo yezinto ezikhonjiswe kusuka ku-mop
Izambatho zangaphansi zabesifazane ezine-sweater ekubunjweni
I-Material irirka ne-lycra ekubunjweni - uhlobo luni lomdwebo, incazelo
Ukwengeza i-lycra ekubunjweni kokugqoka kuthuthukisa ukumelana nokugqoka kwendwangu yokubopha. Izinto ezenziwe ngalezo zinto zilula kalula, kodwa futhi ngokushesha uthathe ifomu langempela. Kusuka kuso badonsa imidlalo - i-pajty, i-pantal, ama-t-shirts. Nokho, ukuthunga izinto zezingane ezincane le ndaba ayifanele. Ngokungafani namaphesenti angama-100% wekotini, ama-shorts, izingubo nezinye izinto ezinamaphesenti amakhulu aseLycra angatholi umswakama - angathuthumela kakhulu kumuntu.
I-toilet ye-Culinary ne-Lycra
Uma ufika esitolo esikhulu sokugqoka, qiniseka ukuthi ubuza umthengisi wehholo: "Ijubane elijatshiwe ne-lycra - yiluhlobo luni lendwangu?" Funda izibuyekezo kanye nezincazelo zemikhiqizo eyenziwe kulokhu okushiwo. Hlola ikhabethe lakho - mhlawumbe, kuzoba khona izinto ezizokhonjiswa kusuka kwendwangu, eboshwe ngaphambili kumafemu aseRussia noma angaphandle. Yazi: iningi le "Lycra" izinto azikho iphethini. Yiziphi izinhlobo zokugqoka lezi? Izitshalo zokugqoka, izigqoko zezemidlalo zokubhukuda nezokuzivocavoca, izingubo zezimfashini, amabhulukwe omzimba omzimba nezigqoko.
I-Sports ti-shot evela egqoke izingubo zokugqoka ene-lycra
Indwangu yesikhumba, ekubunjweni kwendwangu ehlanganisa ukubopha nokugcoba
Ukugqoka igqoke ngogqoke
Interlok noma kurirka: ngabe umehluko phakathi kwalezi zicubu nokuthi yini engcono ukuyikhetha - ukubuyekezwa kokuthungula
Ukuze uphendule lo mbuzo: uhlobo luni lwezintambo ezingcono - interlok noma kurirka, udinga ukunquma ukuthi hlobo luni lomkhiqizo ofuna ukuwuthunga. Ekubuyekezeni kwabo ngezikhathi zokuxhumana, izithuthukisi zezobuchwepheshe zithatha isici esinjengalesi sici-ukungabi khona "kohlangothi olungalungile"; zombili izinhlangothi zibukeka. Ngalendlela yokubopha, iwebhu ayifuni. I-Interlok ithambile futhi ibheka "ngobumnene", kulula kakhulu. Kuhle ukuba i-raspashonok ne-diapers yezinsana, kanye nezingubo zangaphansi. Ukubushelela kwezilwane - indlela engcono yokuthunga ama-T-shirt.
Izingubo ezivela ekugqokeni nasezintweni zokugqoka
I-T-shirt yezingane kusukela ekuhambeni
Ama-Pajama avela ema-interlocks
I-crochet ye-Tunisian yabaqalayo
Indlela yokuxhuma ukubopha ngezinyosi zokubopha?
I-Openwork yemfashini: sasibophe isitifiketi sasehlobo sasehlobo ngezinyosi zokubopha
Amasu we-crochet crochet shawls: imidwebo nezithombe eziseduze
Amabhuzu we-Summer Coot
Amagilavu ​​omama afudumele ngamagundane
Imifino elinejiwe mix
Yidla ngokulahlekelwa isisindo sokuphuza abesifazane
I-Ukraine iphinda ibuyele "uhlu olumnyama" lwezinkanyezi zaseRussia
Amaski ebusweni ngamafutha omnqumo ekhaya
Uma umntwana esaba abantu abangabazi endlini
I-Physiognomy: ukuma kwamehlo, impumu, izindlebe nomlomo
Ifilimu ngesitayela sesiNgisi Essex
Isaladi ngenyama kanye ne-apula
Konke mayelana nezimonyo zokunakekela umzimba ezikhethiwe kahle
Umlingisi u-Olga Zaitseva. Umsebenzi wakhe
Ukusebenzisa amhlophe ngaphakathi
Izinto ezandisa ukwesulwa kobulili kowesifazane
Ungathatha kanjani i-vitamin E ngesikhathi ukhulelwe: umthamo, imiyalelo, ukubuyekezwa
I-Horoscope yezinhlanzi-Abesifazane ngo-Okthoba 2016